Jamaica na-anabata ndị ọbịa 1 nde kemgbe mmalite oria ojoo COVID-19
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Jamaica na-anabata ndị ọbịa 1 nde kemgbe mmalite oria ojoo COVID-19
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Daynel Williams (n'aka ekpe), ya na nwa ya n'aka, na-egosipụta oke ịnụ ọkụ n'obi dịka Minista njem nlegharị anya, Hon Edmund Bartlett (nke atọ n'aka nri) na-agwa ya na ọ bụ onye ọbịa Jamaica na-akwụsị otu nde kemgbe mmalite oria ojoo COVID-3. Ọzọkwa, ịkekọrịta n'oge ahụ, n'oge nnabata nnabata n'ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke Sangster iji mee akara ụbọchị ahụ ụnyaahụ (Ọgọst 19), bụ onye isi oche nke LR ọdụ ụgbọ elu MBJ, Shane Munroe; Onye isi mpaghara ahịa, Blue Diamond Resorts International, Kerry-Ann Quallo Casserly na Jamaica Hotel na Onye isi oche ndị njem, Clifton Reader.
Ọ bụ ihe ijuanya na-agba anya mmiri maka otu onye njem JetBlue na ezinụlọ ya dịka ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke Jamaica bụ akara dị mkpa nke ịnabata otu nde ndị ọbịa kwụsịrị n'ime ọnwa iri na atọ, n'etiti ọrịa na-efe efe.
Onye njem nke ruru otu nde ga-abata Jamaica n'etiti COVID-19 ka e nyere onyinye mgbe ọ bịarutere.
Otu n'ime onyinye ịnabata bụ akwụkwọ ozi ego, nke dị irè maka otu afọ, na-enye ezinụlọ ahụ niile ezumike ụbọchị anọ nke abalị 4 na Royalton.
N'ime nkeji iri na ise gara aga, njem nlegharị anya na Jamaica ejirila 5,000% rute ndị bịarutere.
Daynel Williams, ya na ndị ezinaụlọ anọ so ya, mere nnukwu ọ joyụ ka a na -esi n'ahịrị ndị mbata ndị njem na JetBlue si New York ụnyaahụ (Ọgọst 15), ka ndị otu ndị isi, nke Minista Njem Nleta, Hon. Edmund Bartlett kwuru. E nyere ya onyinye na ekele sitere n'obi maka ịbụ onye ọbịa nke nde kemgbe ahụ Jamaica mepere ọzọ ókèala ya na njem ụgbọ elu mba ofesi na June 15, 2020. E mechiri ókèala niile na Machị 2020, na-ebipụ ndị niile bịarutere ka ọrịa coronavirus, COVID-19, malitere imebi ya.
N'ịnọnyere nwa ọhụrụ n'aka ya ka nwa ọhụrụ jidesiri uwe ya ike, Oriakụ Williams fọrọ nke nta ka ọ daa ogbi mana o jisiri ike kwughachi "Oh Chukwu!" ka ọ na -anwa ijide ọ joyụ ya ka Minista Bartlett gwara ya na dị ka onye ọbịa na -akwụsị nde, ọ bụzi ebe nlebara anya mba ụwa, na -eche ọtụtụ ndị nnọchi anya mgbasa ozi na -agbasi mbọ ike ịbịaru ya na ezinụlọ ya nso.
Nne di ya, Jennifer Williams, onye Jamaica nke si Oracabessa, St Mary, nwere oke ọ joyụ ka anya mmiri gbara ya. “Anọ m na -agagharị na Jamaica ihe karịrị afọ 30 ugbu a na nke a emebeghị; Obi dị m ụtọ nke ukwuu, ọ dị m ka m na -ebe ákwá. ” O kwere ka anya mmiri ọ joyụ na -agbapụta mgbe ọ na -agbakwụnye, “Obi dị m ezigbo ụtọ, enwere m obi anụrị. Enweghị m ike ikwupụta mmetụta m. ”
Otu n'ime onyinye ịnabata ha bụ akwụkwọ ozi ego, nke dị irè maka otu afọ, na-enye ezinụlọ ahụ dum ezumike ụbọchị anọ nke abalị 4 na Royalton, nke onye isi mpaghara mpaghara nke ahịa maka Blue Diamond Resorts International, Kerry-Ann Quallo Casserly gosipụtara.
Mgbe ọ na -ekwu maka mkpa emume a, Minista Bartlett kwuru, sị: "Nke a bụ ihe dị mkpa na akụkọ njem nleta, ọ dịtụbeghị mbụ, n'ime otu afọ na otu ọnwa, anyị enwetala otu nde ndị ọbịa na -abata n'obodo anyị." Tupu COVID-19 ọ were Jamaica ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20 ka o dekọọ nde mmadụ mbata mbụ n'ime otu afọ. Agbanyeghị, rue 2019, obere oge tupu ọrịa ọjọọ etiwapụ, nkwụsị na mbata ụgbọ mmiri jikọtara ọnụ, karịrị nde 4.
Kemgbe emepegharịrị ókèala na June 15, afọ gara aga, njem nlegharị anya enwetala ijeri US $ 1.5 na ihe karịrị 50,000 n'ime ndị ọrụ 130,000 a chụrụ n'ọrụ, na -alaghachi ọrụ ugbu a. Ọdụ ụgbọ elu Sangster International naanị nwere puku ise n'ime ọrụ 5,000 a na -eweghachi.
Maazị Bartlett kwuru na nkeji iri na ise gara aga, “njem nlegharị anya ji pasent ise rịa” ndị na -abata ”ego a na -enweta na -arịkwa elu nke ukwuu,“ yabụ na anyị enweghị obi abụọ maka mmetụta njem na JamaicaMmemme mgbake akụ na ụba. ”
N'etiti oriri nnabata yana Minster Bartlett na Oriakụ Casserly, bụ Director nke Njem Nleta, Donovan White; Onye isi oche ụlọ oriri na nkwari akụ Jamaica na onye njem, Clifton Reader; Onye isi oche (CEO) nke ọdụ ụgbọ elu MBJ, Shane Munroe na Onye isi ala na onye isi oche nke ọdụ ụgbọ elu Jamaica, Audley Deidrick.